Translate Myanmar (Burmese) to Sesotho | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Sesotho, Myanmar (Burmese) to Sesotho translations, Myanmar (Burmese) to Sesotho Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား Lumela u phela joang
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? A na ho na le mang?
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ Kea u rata haholo
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, Le hamburger eoelefella bokae?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? O ka mpitsa tekesi?
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး ke kopa ts'oarelo
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို Ke thahasella
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ Sefofane sa ka se ile sa lieha
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို Ke teng bakeng sa khoebo
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် Lumela, lebitso la ka ke
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို Ke masoabi, empa ke lenyalong
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် Ke kopa ho u botsa
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? Na o ka nkisa boema-fofane?
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ Nako ke efe hona joale, ka kopo?
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? Motebo oa sepolesa o haufinyana o hokae?
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? Na nka alima tefo ea fono ka kopo?
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? A na u ka nthusa?
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? Ke kopa u noe joala ka kopo?
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? Ke bokae?
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး Ke alejiki ho gluten
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ Letsetsa ngaka
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော Na ho na le ngaka?
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? Na nka fuoa mohala?
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ Nketsetsa mookameli oa hao ka kopo.
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် Sebaka sena se setle haholo
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ Nkise hotele ka kopo
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? Nomoro ea kamore ea ka ke eng?